Home Wararka Muxuu salka ku hayaa heshiiska Axmed Madoobe & RW Kheyre?
Muxuu salka ku hayaa heshiiska Axmed Madoobe & RW Kheyre?
Taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ayaa su’aalo ka keenay, walaacna ka muujiyey safarka Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ku tagay magaalada Kismaayo, ayaga oo dareemay isbaheysi siyaasadeed cusub oo abuurmaya.
Walaacooda ayaa salka ku haya laba qodob
1 – Kheyre oo isbahaysi la sameysanaya Axmed Madoobe, isaga oo wada olole siyaasadeed oo uu madaxweynenimo ku doonayo, taasi oo ay dareemayaan in aysan sax ahayn maadaama uu la shaqeeyo madaxweynaha.
2 – Inuu sharciyad siinayo Axmed Madoobe oo waqtiga kasii dhammaanayo, xilli ay jiraan warar sheegaya in xukuumadda ogolaatay in laba sano oo kale uu sii joogo.
Waxaa xusid mudan in loolan uu ka dhexeeyo beesha Axmed Madoobe iyo tan madaxweynaha, taasi oo ku salaysan mustaqbalka maamulka Jubaland, islamarkaana taageerayaasha madaxweynaha ay ka walaacsan qorshaha Kheyre.
Inkasta oo labada tuhunba aan caddeyn loo hayan, haddana isbahaysi dhex-maray Kheyre iyo Axmed Madoobe, waa mid macno badan u samaynaya labadaba, ayna aad suurta-gal u tahay.
Muxuu yahay ujeedka guud ee labada nin?
Kheyre waxa uu doonayaa inuu dalka madaxweyne ka noqdo, sidaas darteedna wuxuu u baahan yahay taageerada maamul goboleeyada, si gaar ahna maamulka Jubaland oo marka laga soo tago Puntland, ah kan labaad ee ugu saameynta badan.
Axmed Madoobe waxa uu doonayaa inuusan dagaal siyaasadeed kaga iman dowladda federaalka ah, uuna kursiga iska sii haysto waqtigii ay doontaba ha la ekaatee.
Axmed Madoobe sidoo kale wax rajo ah kama qabo, kumana jiro hami ah inuu dalka madaxweyne ka noqdo. Waxaa u daran oo kaliya Jubaland
Sidee isku fahmi karaan?
Kheyre, wuxuu Axmed Madoobe siin karaa taageerada dowladda iyo in aan kursigiisa lagu qabsan. Wuxuu sidoo kale u ballan-qaadi karaa in qof isaga ka socda uu siiyo Ra’iisul Wasaare haddii Kheyre Madaxweyne loo doorto ama xilal wasiiro iyo safiiro muhiim ah, haddii Ra’iisul Wasaaraha uu ku qanciyo maamul goboleed kale sida Puntland, maadaama ay ka saameyn badan tahay Puntland.
Axmed Madoobe, wuxuu xaqiijin karaa in xildhibaanada baarlamanka federaalka ee lagu soo dooranayo Jubaland, ay noqdaan kuwa isaga dacaad u ah oo codadkooda siiya qofka isaga uu amro. Sidaas darteed, wuxuu kaalin wanaagsan ka qaadan karaa in Kheyre ay u rumowdo riyadiisa madaxweyne.
Qorshahaas ma socdaa?
Inkastoo aan la saadaalin karin hadana Axmed Madoobe iyo Kheyre ayaa qorshahaas wada, waxaanse cabirayaa sida ay macquul u tahay inay is-fahmaan iyo in walaaca ay qabaan taageerayaasha madaxweynaha uu noqon karo mid loo qiil dayi karo.
Marka aan eego xaaladda siyaasadda ee hadda dalka ka taagan Axmed Madoobe iyo Kheyre waa labada nin ee sida ugu dhow u bahoobi kara, sabbatoo ah danahooda siyaasadeed iskama hor-imanayaan halisna iskuma ahan.
Dhanka kale MW Axmad Madoobe ayaa laga yaabaa in uu istcimaalo Kheyre ilaa laga gaaro doorashada Jubbaland oo lagu wado in ay dhacdo bisha Agoosto ka dibna uu ka taqaluso,